Abesifazane be-pink ladies bank office suit indwangu yentambo edayiwe abakhiqizi nabaphakeli | I-Yun Ai
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu yamantombazane epinki ehhovisi lendwangu yesikhumba idayiwe
Ukuphefumula: Kuyaduduza Ngempela Futhi Kulula Ukugqoka Kuyo Yonke Isikhathi
Esilula: Ilungele izindawo zokuhamba nezokusebenza
Ukuqina: Le ndwangu yokufanelana yesudi ingu-57/58 ”Usayizi obanzi futhi yakhiwe ngo-80% polyester no-20% viscose. Le ndwangu ihlala isikhathi eside ngokwakhiwa, ihlala isikhathi eside, ifinyeleleka kalula ukuwashwa nokunakekelwa.
Sisekela ama-oda enziwe ngokwezifiso, uma unamasampula akho, vele uthumele kithi, ngokuxhumana okuqhubekayo mayelana namasampuli athile, sizokunikeza imiphumela egculisayo kakhulu nokuqinisekiswa kokugcina kwama-oda.
Into Cha: YA17038
Amakhono: Idayiwe, intambo
Ukubala kwentambo: 25S * 30S
I-MCQ: Amamitha ayi-100
Le ndwangu ye-viscose poly ilungele amasudi omfaniswano wabesifazane. Izinga layo eliphakeme lenza kube lula ukusebenzisana nokuthunga izingubo.
Inkampani yethu inezimboni zethu ezimpunga zendwangu, umthamo wokukhiqiza wansuku zonke ufinyelela kumamitha ayi-12,000, futhi eziningi ezinhle zokubambisana zokuphrinta ukudaya imboni kanye nemboni yokumboza. Ngokusobala, singakunika indwangu yekhwalithi enhle, intengo enhle kanye nensizakalo enhle. Sigxile ekuhlinzekeni izindwangu eziningi zemifaniswano yesikole, indwangu yomfaniswano wezindiza kanye nendwangu yesudi yehhovisi, eyenzelwe ngokukhethekile abasebenzi abahlukahlukene njengabafundi, umphathi womoya, abashayeli bezindiza, abasebenzi basebhange, abasebenzi be-horeca, amalungu eqembu nabanye. Zonke izindwangu zethu zenziwa zikhumbula izinga lokunethezeka ukuze kugwenywe ukuphazamiseka phakathi namahora amade okusiza.